Rafitra mpivarotra mahazatra
Rafitra fanairana mahazatra
Trigger Trader Systems
Trigger Alert Systems
Better Trading Systems Ltd. dia natokana hanome ny ampahany amin'ny tombom-barotra alohan'ny hetra alohan'ny taona ho an'ny fiantrana. Ity dia napetraka amin'ny 2.5% ankehitriny ho an'ny taom-pivarotana voalohany fa manantena izahay fa mety hitombo ara-potoana izany rehefa mitombo ny orinasa.
Izaho dia mpino lehibe amin'ny fanomezana ny fiantrana; na ny fanomezana tsy tapaka ny fiantrana tianao indrindra, ny fanaovana asa an-tsitrapo na ny fividianana olona tsy manan-kialofana eraky ny kafe amin'ny alin'ny ririnina mangatsiaka.
Mino koa aho fa ny fanomezana ny fiantrana dia tsy vitan'ny hoe tsara ho an'ny olona mandray fotsiny fa tsara ho an'ny olona manome satria manampy antsika hankasitraka ny habetsaky ny ananantsika izany.
Ankehitriny, ny fiantrana rehetra dia azo atao ary tokony ho raisina ho antony mahasoa nefa izaho koa dia mino mafy ilay fomba fiteny taloha hoe 'Mividiana trondro ho an'ny olona iray dia afaka mihinana iray andro izy, fa ampianaro hanjono ny olona ary afaka mihinana mandritra ny androm-piainany '.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, Better Trading Systems Ltd. dia manome an'ireo fikambanana mpanao asa soa izay manome serivisy tena manova fiainana ary afaka mamadika ny fiainan'ny olona. Raha ny hevitro, ireo fiantrana ireo dia mety hisy fiatraikany amin'ny fiatraikany lehibe indrindra amin'ny fanomezana kely indrindra voaray. Izany dia miantoka fa ny fanomezana dia mandeha hatrany lavitra ary misy fiatraikany lehibe indrindra amin'ny olona betsaka indrindra.
Raha te-hanome fanomezana ho an'ireo fikambanana mpanao asa soa etsy ambany ianao, dia araho azafady ny rohy ary ataovy mivantana ny fanomezanao satria io no fomba mahomby indrindra handraisan'ny fiantrana ny fanomezana.
Mifantoka amin'ny fanomezana rano madio sy amin'ny ady amin'ny aretina sy ny aretina. Ny sasany amin'ity asa soa ity dia misy:
Fametrahana toeram-pivoahana sy fandroana.
Fametrahana toerana fanasana tanana
Hatramin'ny nanombohany tamin'ny 1981, ny fanampiana ny rano dia nahatratra olona 27 tapitrisa manana rano madio.
Ity dia iray amin'ireo fikambanana mpanao asa soa mahomby indrindra. Isaky ny $ 1 natolotra, $ 4 dia averina amin'ny famokarana.
Sightsavers dia fikambanana iraisam-pirenena miasa any amin'ny firenena mahantra mihoatra ny 30 any Afrika sy Azia mba hamongorana ny fahajambana azo sorohana.
15p fotsiny ny vidiny hitsaboana ireo aretina trachoma maharary.
£ 12 hiarovana fianakaviana 720 tsy hahita ny mason'izy ireo noho ny fahajambonan'ny renirano.
4 pounds hanatanterahana fandidiana trachoma.
30 £ hanatanterahana fandidiana katarakta amin'ny olon-dehibe.
Mpiara-miasa Smile Train miaraka amin'ny hopitaly mpiara-miombon'antoka 1 100+ manerana ny firenena 90+ mahantra indrindra eto an-tany hanatitra fandidiana hazavana.
Ny fandidiana tsirairay dia mitentina £ 150 ary afaka mamonjy zaza amin'ny fanaintainana, amin'ny aretina ary ny stigma mandritra ny androm-piainany.
Forme misoratra anarana
Ny fifanakalozana fifanakalozam-bola vahiny amin'ny maritiana dia miteraka risika avo lenta, ary mety tsy mety amin'ny mpampiasa vola rehetra. Alohan'ny hanapahanao hevitra ny varotra fifanakalozana ivelany dia tokony hodinihinao tsara ny tanjonao amin'ny fampiasam-bola, ny haavon'ny traikefa ary ny filan-dratsy. Ny mety misy dia ny hahazakananao ny fahaverezan'ny sasany na ny fampiasam-bola voalohany ary noho izany dia tsy tokony hampiasa vola izay tsy zakanao ho very. Tokony ho fantatrao ny risika rehetra mifandraika amin'ny fifanakalozana fifanakalozana vola vahiny, ary mangataha torohevitra amin'ny mpanolotsaina ara-bola mahaleo tena raha manana fisalasalana ianao.
Ny vokatray rehetra dia arovan'ny zon'ny mpamorona. Better Trading Systems Ltd. dia orinasa voasoratra anarana any Angletera sy Wales. Nomeraon'ny orinasa 13081267. Adiresy fandraharahana voasoratra anarana 160 Kemp House, City Road, London EC1V 2NX.